USB System Lock for your PC Security - Knowledge is Free
(သင့် PC ကို USB flash drive လေးနဲ့ သော့ခတ်ထားရအောင်)
တစ်ဦးချင်းသုံး ကွန်ပျူတာများ ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် computer အတွင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ File များ၏ လုံခြုံရေးကို ယနေ့တိုင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ software မျိုးစုံပေါ်နေသလို ၎င်းတို့ကို ချေဖျက်မည့် software များကလည်း နောက်ကလိုက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု MP3 Player(with USB port), thumb-size USB storage, card reader... အစရှိတဲ့ drive တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါပြီ။ အဆိုပါ software ဟာ USB System Lock 1.8.0 Version အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဖိုင် Size အရွယ်အစားမှာ 982 KB ဖြစ်ပါတယ်။
http://usl.sourceforge.net/ မှ အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
1. USB System Lock part 1 ကို Install လုပ်ခြင်း
USB System Lock ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို သုံးရန် အဆိုပါ software ကို computer တွင် install တင်ရပါမည်။ ၎င်းသည် အလွန်လွယ်ကူ၍ ရယူ ထားသော USB System Lock 1.8.0 Installer အမည်ရှိ software ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် ပုံတွင် ပြထားတဲ့အတိုင်း box တစ်ခုထပ်မံပြီး ကျလာပါလိမ့်မယ်။
I Agree ကို ထပ်မံရွေးချယ်၍ click နှိပ်လိုက်ပါ။
2. USB System Lock Par2
USB System Lock သည် GPL လိုင်စင်အောက်တွင် ရှိသောကြောင့် ၎င်း တွင်ပါရှိသည့် source code များကို ရရန် Next ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး Install ကို Click နှိပ်ပါ။
ပြီးနောက် Finish ကို click နှိပ်ပေးပါ။
ပထမဦးစွာ သင်၏ USB thumb drive ကို USB port တစ်ခုခုတွင် တပ် လိုက်ပါ။ Windows စနစ်သည် 'Key Disk Creator' program ကို ချိတ် ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ဘာမှမပေါ်ခဲ့ပါက refresh ခလုတ်ကို click နှိပ် လိုက်ပါ။
ထပ်မံပြီး USB drive ကို ရွေးချယ်ပြီး Next ကို click နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Next ကို ထပ်မံ click နှိပ်လိုက်ပါ။
ထပ်မံ၍ Finish ကို Click နှိပ်ပြီး Restart လုပ်ပေးကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ Flash Drive ကိုလည်း ဖြုတ်နိုင်ပါပြီ။
Window တက်လာပြီးနောက် ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း Desktop ပေါ်တွင် ပေါ်လာမယ်။ ထိုအခါ keyboard, Mouse ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ ပိတ်ဆို့ ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို စောစောက သိမ်းယူထားတဲ့ thumb drive ဖြင့် သော့ဖွင့်သကဲ့သို့ ပြန်ဖြည်ရပါတော့မယ်..။
1. What is USL?
Nowadays, security become more and more important. USB System Lock(USL) is the solution to enhance system security. Beside of basic password authorisation,aphysical key can provide extra security. This program is written in Visual Basic and run on Microsoft Windows. It can fully protect the system under normal boot. (Cannot work under safe mode) The program will generatearandom string and store it into the USB key drive and windows registry. Once the system is locked, the user have to insert the USB drive that contain the right key to unlock. We bypass the Windows Task Manager too, so it should be 100% safe and secure.
2. Download USL
You can download USL with the below links:
USL current release:
http://www.howang.hk/usbsldown.php(My website - howang.hk)
This project is still under development, but the latest version is stable enough to use. We are welcome to all programmer who want to join us!
You may visit our project page at sourceforge.net!
If you like this project, you may donate to us on sourceforge.net!
This will help mealot and I can improve this program much more frequently because you've shown that you are concern about this project.
5,400 downloads can't be wrong!
Up to 3th May 2007, USL have more than 5,400 downloads! Users all arround the world are living proof showing that USL is safe and secure!
Ref: Computer Journal (Feb, 2006)
Posted by kmo at 9:32 PM